Minya: Feon’ambanivohitra maro hafa avy ao Dawadeyya · Global Voices teny Malagasy
Mitombo hatrany ireo tambanivohibavy mampiasa ny mediam-bahoaka ao Minya!
Voadika ny 21 Oktobra 2019 8:32 GMT
Mitohy ilay tetikasa vatsian'ny Rising Voices, Women of Minya Day by Day, satria mitombo hatrany ireo tambanivohibavy avy ao amin'ny vohitr'i Dawadeyya ao Minya mampiasa ny mediam-bahoaka hizaràny ny zavatra iainany, ny ahiahiny, sy ny nofinofiny. Manome feo ho anà vondrona voahilikilika izay tsy dia fahenontsika firy – vehivavy miasa anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna any ambanivohitra na anatin'ny fambolena izany na anatin'ireo indostria hafa any ambanivohitra – ny bilaogin'ilay tetikasa, Orzgyat el Saeed [ar]. Mazàna, miasa anatinà fepetra iasàna tsy hieren-doza ireo vehivavy ireo, no sady miaina toedraharaha sarotra any an-tranony. Ndreto ny sasany amin'ireo tantara sy eritreritra nozarain'ireo vehivavy ireo momba ireo zava-nitranga farany tao Egypta, sy ny tantaran-dry zareo manokana.
Anatinà lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ireo Zazavavy sy ny Rivopanovàna,” mizara ny heviny momba ilay fikomiana niseho tany amin'ny tapany voalohan'ny taona 2010 manerana an'i Egypta ny sasany amin'ireo vehivavy. Nanoratra i Salma:
Faly be aho noho ny hetsika noraisin'ireo Egytiana satria namaky ny sakan'ny fahanginana manoloana ny kolikoly izahay. Eny ho an'ny fahafahana ary tsia ho an'ny kolikoly!
Nanoratra i Nadia:
Naheno vaovao aho isanandro momba ana olona maty, kanefa sady faly aho satria misy olona miezaka miaro ny firenena amin'ny kolikoly.
Atrikasa fanoratana bilaogy ao Minya
Koa satria nanosika Egyptiana maro hafa hieritreritra momba ny pôlitika sy hiresaka momba izany ilay fikomiana farany niseho, nizara ny fandinihany ny fandraisan'ireo tambanivohibavy anjara anatin'ny pôlitika [ar] i Warda Fahmy, vehivavy iray hafa avy ao amin'ny vohitr'i Dawadeyya:
وهي لم تقرأ ولم تكتب؟ لانه اتحرمت من حقها في التعليم .المرأة الريفية تختلف عن المرأة في المدينة ، ففي الريف لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة فالمرأة في الريف يقتصر علي تربية الاولاد والحقل للعمل ، اما المرأة في المدينة لها كثير من الحقوق مثل الرجل في التعليم والعمل
Koa satria tsy mahafantatra ny atao hoe fiainana ara-pôlitika ny tambanivohibavy noho ny tsy fananany fahatongavan-tsaina hamantatra ny zony sy ny adidiny manoloana ity firenena sarobidintsika ity, ahoana no hahafahanymandray anjara raha sady tsy mamaky izy no tsy manoratra satria nesorina taminy ny zony hianatra? […] Samy hafa amin'ny vehivavy an-tanàndehibe ny tambanivohibavy. Any amin'ireo faritra ambanivohitra, tsy mitovy ny lahy sy ny vavy; voafetra amin'ny fitaizàna ny ankizy sy ny fiasàna any an-tsaha ny asan'ny vehivavy. Kanefa, ireo vehivavy an-tanàndehibe dia manan-jo kokoa mitovy amin'ny lehilahy eo amin'ny fianarana sy ny asa.
Fiainana ambanivohitra ao Dawadeyya
Ireo hafa kosa mampiasa ny sehatra fanoratana bilaogy nomerika hiresahana olana manokana sy saropady kokoa. Nisy zazavavy iray tsy nitonona anarana nizara ny zavatra maharary nanjo azy tanatinà lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny niainako ny Famoràna ny Fananahan'ny Vehivavy (FGM),” izay nanoratra:
انا كنت بسمع عن تجربة ختان الاناث وكنت بسمع عن بنات كانت بتضر منه، وفي يوم سمعت امي وهيا بتتفق مع الداية اللي هتختني وحاولت اقول بأعلى صوت حرام يا امي، انا مش عايزة اتختن انا بخافحاولت اقول بأعلى صوت حرام عليكم، دا مفيش في القرآن ولا الانجيل حاجة بتقول كدا .
Naheno momba ny FGM sy ireo vehivavy maratra noho io foana aho. Indray andro aho naheno ny reniko nifanaraka tamin'ilay mpampivelona hanao ilay izy. Niezaka niteny tamin'ny feo mafy indrindra takako aho, “Tsia neny ah! Tsy te hiatrika izany aho, matahotra aho […] Niezaka niteny aho fa haram (voararan'ny finoana) izany. Tsy nisy nilaza izany tao anatin'ny Korany sy ny Baiboly […] Malahelo aho fa noforaina. Tsy naniry izany aho. Raha manana fahefana aho rehefa manan-janaka vavy, tsy hanao izany ary ireo.
Anatinà lahatsoratra iray hafa miresaka momba ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fanilikiliana, mitondra ny lohateny hoe “Ireo olana amin'ny Fahamombàna [ar],” mizara izao hevitra manaraka izao ireo vehivavy:
Misy olana ny fahamombàna anatin'ny vohitra misy anay. Raha tsy afaka miteraka ralehilahy, mifikitra aminy ny vadiny ary miara-miaina aminy tsy mampahatisahy azy ny fahamombàny. Fa raha izy kosa no momba, manambady vehivavy hafa ralehilahy ary tsy miraharaha ny miara-miaina amin'ny vadiny. Na dia tohizan-dry zareo aza ny fanambadiana, mijabajabaka ny fianakaviana ary manomboka manala baraka azy sy mizara ny vaovao momba ny fahamombàny, ary avy eo dia mangataka an'ilay lehilahy hanambady vehivavy hafa. […] Raha sarahany ilay vehivavy, tsy hanambady intsony izy satria efa fantatry ny vohitra iray manontolo fa tsy mety mahazo zaza izy.
21 Oktobra 2019fandikàna-gazety